बैशाख ३ गते बिहान ४:४४ बजेबाट ५ राशीलाई बन्दैछ माङ्गलिक योग ! – Jagaran Nepal
Jagaran Nepal बिहिबार, बैशाख ०२, २०७८
वैशाख ३ गते बिहान राशि परिवर्रतन हुदैछ । २ गते बिहान अर्थात ३ गते बिहान ४ बजेर ४४ मिनेटमा मंगल ग्रह वृष राशिबाट मिथुन राशिमा प्रवेश गर्दैछ । राहुको चपेटाबाट छुटकारा पाएर मिथुन राशिमा गए पनि उ आफ्नो शत्रु राशिमा गएर बसेको छ ।
के हो माङ्गलिक योग र यसले मानवीय जीवन मा के गर्छ ?
मानव को जन्म सगँसँगै उसले आफ्नो भाग्य र भविष्य नि लिएर आएको हुन्छ । कहिले शुभ योग लिएर जन्म हुन्छ त कहिले केही अशुभ योग मा पनि जन्म हुन्छ । त्यस्तै माङ्गलिक भनेको जातकको कुन्डलीको १, ४, ७, ८ र १२ औ स्थानमा मङ्गल बसेमा माङ्गलिक योग बन्दछ।
सामान्यतया माङ्गलिक हुने मान्छे नेतृत्वदायी स्वभावका हुन्छन् , यिनीहरू कसैको अधीन मा बस्न रुचाउदैनन / यिनीहरू लाई (माङ्गलिक हरू लाई ) सामान्यतया २८ बर्ष भन्दा अगाडी विवाह गर्नु खासै लाभदायक हुँदैन । यदि यस्ता माङ्गलिक हुनु साथमा पापी ग्रह को दृष्टि छ भने वैवाहिक जीवनमा खलबल ल्याउन सक्छ र यस्तो कुण्डली हुने हरू ले माङ्गलिक शान्ति गरेर वैवाहिक जीवनमा बाँधिनु सबै भन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
मङ्गल ग्रह चन्द्रमा को साथमा बसेमा महालक्ष्मी योग बन्छ र यस्तो व्यक्ति धनले भरिभराउ हुन्छ । अन्त्यमा :- चिना कुण्डली मिलाएर मात्रै विवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विशेषत यी ५ राशिलाई माङ्लिक योग पर्दैछ । १) मिथुन राशि २)वृश्चिक राशि ३)धनु राशि ४)मीन राशि ५)कर्कट राशि
बाकीँ कुरा भिडिओमा हेर्नुहोस